Andreas Sahlin နှင့်သောမတ်စ် Mehlin ပြဇာတ်ရုံလုပ်နေတာ | Holmbygden.se
အပေါ် Posted5ဇူလိုင်လ, 2017 အားဖြင့် Holmbygden.se
လကျထကျ၌၎င်း, သည်အထိ 14 ဇူလိုင်လပြဇာတ်ရုံအစုတခုခုပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါ Ökensagan Erikslund နှင့် Andreas Sahlin အတွက်ပြည်သူ့အိမ်ရထားတောင်ကနေသူ့တီးဝိုင်းနှင့်အတူဂီတအဘို့ရပ်တည်. အများစုက Holmbor သူကို Lodge များမှာ, Sandnäsetသို့မဟုတ်အခြားပွဲလမ်းသဘင်အခါသမယတောင်တန်း Drive ကိုထုတ်လုပ်ငယ်ရွာ၏ဂီတအခွက်၏မှတ်စုယူကြပြီ. လူဟောင်း Orjan နှစ်ဦးစလုံး “ခန်းမ” Sahlin, နဲ့သား Andreas, ခဲတစ်ကျေနပ်ပရိသတ်ကိုမပါဘဲဒေသများရှိဖြစ်ရပ် left. တီးဝိုင်းနှင့်အတူယနေ့ Andreas ကလက်ရှိ Domino Majestic နွေရာသီအတွက်.
Indal ထံမှ Andreas အနီးဆုံး squire သောမတ်စ် Melin ကိုလည်းတီးဝိုင်းများတွင်ကစားများနှင့်လည်းသတ်မှတ်ထားကန္တာရသခင်ဘုရားအဘို့အဇာတ်ညွှန်းရေးသားခဲ့သည်, set ကိုတစ်ဂီတပြဇာတ်ရုံအရာတစ်ခုဖြစ်သည်ကမ္ဘာကျော်. အတူတူသူတို့ကဟာသတွေနဲ့ပုံဖော် 1800 ကနေ United States ကိုထွက်ခွာသွားတဲ့သမိုင်းကိုကိုယ်စားပြု, အပူနှင့်ဂီတ. ပင်ယနေ့ပြောင်းရွှေ့သူများကဝေမျှစေခြင်းငှါနေ့စဉ်သတင်းများယနေ့အတွေ့အကြုံများ, ကြောင်းအစားသွား, ဆွီဒင်မှကြွလာ.
ဇာတ်စင်တွင်ထက်မနည်းကစား 35 လူပုဂ္ဂိုလ်များ, ပိုင်းနဲ့ မှလွဲ.. ယနေ့စတော့ရှယ်ယာများ၏အယူအဆ, ဒါပေမယ့်မျက်မှောက်၌ပွဲဝင်သောတွေ့ကြုံခံစားဖို့ချင်ပါတယ်သောသူတို့အဘို့ဘွတ်ကင်မှထွက်ခွာရက်ပေါင်းနေဆဲရှိပါတယ်. Läs mer och boka biljett här!
အဆိုပါတီးဝိုင်းဒိုမီနိုဘုနျးကွီးမှာတွေ့နိုင်ပါသည် Spotify, Youtube ကို သို့မဟုတ် Facebook.